Zimbabwe opposition on deadline to appeal election result – Nehanda Radio
By Nehanda Radio On Aug 10, 2018 28,515
Zimbabwe's opposition leader Nelson Chamisa casts his vote at polling station during Zimbabwe General Elections on July 30, 2018 in Harare. (Photo by ZINYANGE AUNTONY/AFP/Getty Images)
Zimbabwe’s opposition faced a deadline Friday to file its legal challenge to try to overturn the July 30 election result, which has been mired in fraud allegations and a government crackdown on opponents.
Zimbabwe’s opposition leader Nelson Chamisa casts his vote at polling station during Zimbabwe General Elections on July 30, 2018 in Harare. (Photo by ZINYANGE AUNTONY/AFP/Getty Images)
Western nations added they were “deeply disturbed by continuing reports that opposition supporters are being targeted by members of the Zimbabwean security forces”. AFP
elections in ZimbabweEmmerson Mnan­gagwaNelson ChamisaZimbabwe Election
Jul 5, 2022 46,189
Jul 5, 2022 79,625